၁.၄ You အနေဖြင့် တစ်ခုမှတ်သားမိစေရန်မှာ You မှ Company platform အသုံးပြုခြင်းသည် ဤ ကိ်ုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ ကို သဘောတူသည်ဟု Company မှ မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁.၆ အခြားနည်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက ဤ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒပါ စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် Flexible Pass ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ တွင်ဖော်ပြထားသည့် စကားလုံး အဓိပ္ပါယ် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Company မှ မည်သို့ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း
၂.၁ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည့် စကားလုံး၏ ဆိုလိုရင်းမှာ You ကို အတည်ပြုနိုင်သည့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ဆိုလိုပါသည်။
၂.၂ Company မှ You ထံသို့လိုအပ်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်း အရသော်လည်းကောင်း၊ အလိုအလျှောက်ကောက်ခံသည့်စနစ်များအရသော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း Company မှ You ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ကောက်ခံပါသည်။
၂.၃ You မှ Company နှင့် ဆက်ဆံနေသည့်ကာလအတွင်းတွင် Company မှ You နှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို လိုအပ်သလိုတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ You အနေဖြင့် အဆိုပါတောင်းခံချက်ကို မပေါ်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် Company အနေဖြင့် You အား platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအား မပေးအပ်နိုင်ခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ You မေးမြန်းသည်များကို မဖြေကြားနိုင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
၂.၄ Company မှ You ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားနည်းများဖြင့်လည်း စုဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာပေးရမည်ဆိုလျှင် You အနေဖြင့် လူမှုဝက်ဆိုဒ်မှတဆင့် Company စာမျက်မှာများကို ထိတွေ့အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် Company မှ ဦးစီးကျင်းပသောပွဲများသို့ You မှ တက်ရောက်ခြင်း။
HOW COMPANY USE YOUR INFORMATION​
3.1 The Company only use your personal information of the specific purposes as below if you areaFlexible Pass User:
i. Usage Relating to your Flexible Pass User Account;
ii. To support or Facilitate your experiences to use the Platform;
iii. To conducting Market Research;
iv. To comply with the Laws and Regulations and enforce the legal rights; or
v. To detect, investigate and prevent any kinds of fraudulent;
vi. To send you marketing and promotional information and materials.
၃.၂ Company မှ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ (You မှ Flexible Pass နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Partners ဖြစ်ပါက) You ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
(က) You နှင့် အသွားအပြန် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် လက်ဆောင်များပေးပို့ရန်၊
(ခ) You လိုအပ်များကို ထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ပေးလိုက လုပ်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဂ) ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရန်၊
(ဃ) လိမ်လည်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကာကွယ်ရန် တို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
၃.၃. You မှ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းများပေးပို့ခြင်း မပြုလုပ်ရန် email ရှိ “Unsubscribe” ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ထိုသို့ သတင်းများပေးပို့ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် Company အနေဖြင့် You ထံသို့ အခြားသော အချက်အလက်သတင်းများပေးပို့နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၃.၄ Company မှ You ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အခြားနည်းအသုံးပြုလိုပါက သင့်ထံမှ သီးခြား ခွင့်ပြုချက်ရယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Company မှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့ စီမံခြင်း
4.1 The Company will do due care to ensure your personal information is stored securely to protect your personal from disclosure or misuse or unauthorized access and modification from time to time.
4.2 According to the nature of the Internet, we cannot accept responsibility for any unauthorized access, unlawful interceptions or loss of personal information which we take commercially practical steps to protect your personal information.
၄.၃ You ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်တော်တို့ Company မှ လိုအပ်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာအထိ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅.၁ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ နှင့် ပတ်သက်ပြီး You မှ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက info@flexiblepass.com လို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၆.၁ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကား အသုံးပြုမှုတွင် မတူညီမှုများရှိခဲ့ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား မှာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
Flexible Pass ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်နေရာပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ Category အမျိုးအစား‌ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို အလွယ်တကူ Booking တင်ပြီးသွားနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Membership Pass ဖြစ်ပါတယ်။
Unit 11 E (10th floor), 178 Upper Pansodan Road, Mingalar Taungnyunt, Yangon, Myanmar
2020 @ Copyright. All right Reserved by Flexible Pass